MGTHANT.ME: စင်ကာပူ ပရိုမိုးရှင်းများ - BEST Warehouse Carnival, Isetan Travel Fair, John Little Mego Expo, Timeberland Warehouse and Fashion Warehouse
Without ME, It is just AWESO. With ME, It is AWESOME
The contents providing on this post are just for information sharing purpose only. I am not affiliated with any sales or promotion companies above. The information could be from unreliable sources, incomplete, inaccurate and changed or altered anytime without notice.
I will not be responsible on any lost or damages happen to you concerning above information All logos, posters and graphical contents are copyright of their respective owners and I do not own any of them.
အိုင်တီပြပွဲ ဆမ်ဆောင်း ဂလက်ဆီ စမတ်ဖုန်း နဲ့ တက်ဘလက...
စင်ကာပူ အကြီးကျယ်ဆုံး အိုင်တီရှိုးပွဲတွေထဲက Comex 2...
ကမ္ဗည်းတင်ခံရတဲ့ 'အိုဘာမား' တို့ စုံတွဲ ပထမဆုံး အနမ...
နာမည်ကြီး 'Top Gun' ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ ဟောလီးဝုဒ် ...
ကားတိုက်မှုထဲပါပြီး ၈ရက်ကြာ မေ့မြောနေတဲ့ ကလေးငယ်ကို...
စင်ကာပူ ပရိုမိုးရှင်းများ - BEST Warehouse Carniva...
အိမ်အလုပ် လုပ်ရလို့ ရဲကို တိုင်တဲ့ ဂျာမန် ကောင်လေး...
စတိပ်ဂျော့အိမ်ကို ခိုးတဲ့ သူခိုးကို စတိပ်ဂျော့ရဲ့ ...
ဘီလာရုစ်က ထိပ်တန်း စစ်ဗိုလ်ချူပ် နှစ်ဦးကို ထုတ်ပယ...
မြန်မာ သတင်းဆိုဒ်များ ဘလော့များ စုံစုံလင်လင် စုစည်းထားတဲ့ နောက်ထပ်နေရာလေး တစ်ခုhttp://myanmarlinksdirectory.blogspot.com
[image: Photo: ဆီးနဲ့ပြုတ်တဲ့ ကြက်ဥ ============= ကြားရတာနဲ့တင် အော်ဂလီဆန်ချင်စရာပါပဲ၊အစားအသောက်တွေမှာ အထူးအဆန်းတွေမှစားတဲ့ တရုတ်ပြည်မှာပါ၊လွန်ခဲ့တဲ့ ရှေ...
Maroon5ရဲ့ One More Night ၊ Payphone နားထောင်ကောင...
နှလုံးသားနဲ့ နားထောင်ပါသူငယ်ချင်း………… ခင်စရာကောင်းသော မြန်မာပြည်ရဲ့ အထာနဲ့ 
လူဆင်းရဲစာရင်းမှာ မင်းပါနေလို့ 
ကျောင်းနေဖို့ ကိစ္စ စိ...
မေလ (၁၈) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ North Point Center မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Rဇာနည် ရဲ့ "အဆိပ်တက် အိပ်မက်" DVD & VCD Promotion
Myanmar well-known singer Rzarni pro...
ထောပတ်ကိတ် လုပ်နည်းကို video file နဲ့ရှယ်ထားတာလေးပါ 13 hours ago
မနက်ဖြန်ထမင်းဗူးထည့်ဖို့ ညကတည်းကကြော်ထားတဲ့ ကြက်သားရောင်စုံကြော် ကြက်သားရောင်စုံကြော်အတွက်လိုအပ်တာလေးတွေက ကြက်သား မျှစ် ပဲပြား ထီးမှို ငရုတ်ပွ ဥနီ ခရမ်း...
Assault on Wall Street aka Bailout The Age of Greed 2013
http://www.putlocker.com/file/1DE1C6E86E053ECB http://vidto.me/lu797fnpq79q.html http://flashx.tv/video/76Y4SMBXKMX2/AssaultonWallStreet2013WEBRipXV...
ဟိုနေ့က Play Store ထဲရေဒီယို ဆော့ဝဲလ်တွေ လိုက်ရှာတာရင်း တွေ့လို့သုံးကြည့်တော့ အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ... မြန်မာ Online radio တစ်ခုပါ။ လက်ရှိကျွန်တော် အသုံးပြုနေ...
မေ ၁၈ ဂွာန်ဂျူ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ
၁၉၇၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက် သမတ ဘဂျောန်ဟီကို ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ချုပ် ကင်းမ်ဂျဲဂယူက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်လိုက်ပြီးနောက် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင် မစ္စတာ ချွဲဂယူဟာက သမတ ရ...
ကပိလ၀တ်မြို့ဟောင်းကို ကြည့်ရှု လေ့လာပြီးတဲ့နောက် လုမ္ဗိနီဥယျာဉ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ညအိပ် တည်းခိုဖို့ ထွက်ခ...
သာသာလေး တိုက်ခတ်ရာကနေ တရှိန်ထိုး တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေပြင်းတခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဘယ်လိုပဲတိုက်တိုက် ချစ်ကျွမ်းဝင်မိလေတဲ့ ကျနော်က အပြစ်မမြင်ပဲ ချစ်ခင်လို့သာနေတယ်။ သူ...
Number of View: 369 ဒီနှစ်နွေက အရင်နှစ်ထက် ပိုပြင်းတယ်။ အပူရှိန်တွေက တရိပ်ရိပ်နဲ့။ သင်္ကြန်မှာ ပိတောက်နဲ့အတူ သင်္ကြန်မိုးကို မျှော်ခဲ့ပေမယ့် ပိတောက်က မိုးနဲ့အ...
ချစ်သူကိုချစ်တယ်လို့မပြောရဲတဲ့သူအတွက် အနှစ်တစ်ထောင်စာ စကားမဲ့စေဆိုတဲ့ စကားစုလေးကို နေရာတစ်ခုမှာ ကျွန်မဖတ်ဖူးခဲ့ပြီးခုထက်ထိ စွဲလမ်းအမှတ်ရနေတဲ့စကားလေးတစ်ခွ...
ဒီတလော Facebook ရောဂါစွဲကပ်ပြီး အဲ့ပေါ်ရောက်ရောက်နေတာနဲ့ စာရေးတွေကျဲနေတယ်။ အဲ့မှာရှိမယ့်သာ ရှိနေတာပါ... ကိုယ်ကနလပိန်းတုံးဆိုတော့ တစ်ခု...
ခြံထဲမှာ အစာရှာနေတဲ့ ဌက်ကလေးတွေ တွေ့ရတယ်။ ဒီဘက်က မိုးခေါင်
ဗမာပြည် အရှေ့မြောက်ဘက်ယွန်းယွန်း၊ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာ "၀" ပန်း လို့ခေါ်တဲ့ "၀"ပြည်ရဲ့ မြို့တော် ပန်ဆန်းမြို့ ရှိတယ်လေ။ တန်...
မင့် မျက်လုံးတွေထဲမှာပဲရှိနေတယ် ။
အိပ်မက် မမက်ဘူး ၊
ဘယ်ရီသီးများ စားခြင်းဟာ အသက်ကြီး လာလို့ ဦးနှောက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းခြင်းကို ကာကွယ် ပေးနိုင်ရုံ...
၁၃ မေ မှာတိကနဲပဲ ဒီလိုနဲ့
Priest Lake is the politics in idaho in Idaho. It hasastronger financial gain than those suffering from large real estate market. The low unemployment ...
ရန်ကုန်က အငြိမ်းစားရဲအရာရှိတဦးနဲ့ တနေ့ကဆုံဖြစ်တယ်။ ဟိုအကြောင်း
ဒီအကြောင်းပြောကြရင်း သူအရေးယူခဲ့ဖူးတဲ့ ဘုန်းကြီးအမှုတခုက စိတ်ဝင်
Without these, you can't really develop much. You could beagenius or go broke trying to access. You should downloadasoftware called registry cleaner ...
[image: fl-studio-producer-edition-poster.png] ကဲသူငယ်ချင်းတို့ ရေ မနေ့ က ကွန်ပြုတာသင်တန်းလေးကိုရောက်နေတော့ဘာမှမတင်ပေးလိုက်ရပါဘူး
ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန် စံလွန်သွားတာ နှစ် ၂၅၀၀ ကျော်ပြီ။
မရှိတော့တဲ့ မြတ်စွာဘုရားကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်လို့ ရသေးသလား။
တော့မသိ သူ့ပစ္စည်းဆို အသေသိတယ်။သူ့ခေါင်းအုံးပေါ်သွားအိပ်ရင် မကြိုက်ဖူး။မိဘတွေ ...
ဝိဇ္ဖာ၊ဇော်ဂျီ၊တပဿီ ဆိုပြီး မြန်မာစကားမှာခပ်ရောရောသုံးတယ်။ ဇော်ဂျီကတော့ ယောဂီကိုအသံထွက်မှားတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီး၊ သမထ ပွားများတဲ့ဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုဟန်တူတယ်။ (ဟန...
အမေ့ရဲ့မွေးနေ့နီးလာသလို အမေများနေ့ဟာလည်း နီးလာပြီ။
အကြမ်းဘယ်လို ဘာကြောင့်ဖက် ယာဇ်ပူဇော်လိုခြင်း၊ သားမယားလုယူလိုခြင်း၊ အသားငါးလုယူလိုခြင်း၊ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးလိုခြင်း၊ မီးကိုပိုင်ဆိုင်လိုခြင်း၊ အိမ်ယာပိုင်ဆိုင...
*ကောင်း*ကင်၏ အနောက်ဘက်ထောင့်ဆီမှ တိမ်မည်းညိုတို့က တရိပ်ရိပ်ဖြင့် နိမ့်ဆင်းလာနေခဲ့ကြတာကို မြင်နေရ၏။ လေပြင်းတွေကလည်း ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်တွင် အဆက...
နှစ်ယောက်တည်းနေမယ့်အိမ် ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ (၈) ရက်
နှစ်ယောက်တည်းနေမယ့်အိမ်ကလေးကို စပြီးဆောက်တော့မလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ၊
ဒီနေ့တော့ ဆောက်ဖို့ ခွင့်ပြုချက်...
နေနိုင်သူတွေ မဖတ်နဲ့ ။
MMSubPlayer for iPhone, iPad App
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော် ခန့်သူလင်းပါ။ MMSubPlayer for iPhone, iPad နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ အိုင်ဖုန်း၊ အိုင်ပက် တို့ပေါ်တွင် ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို ကြည့...
My Thoughts on 969 Movement
If anyone had been reading the news these days on Myanmar, you will be reading all about the clashes between Muslims and Buddhists in some towns, leaving...
ကဗျာ့အိုးဝေ ဧပြီ ၂၃၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်။ ကိုငြိမ်းဝေ (RFA) ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ သောတရှင်များ၊ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ။ အခုရက်တွေမှာ ကျနော်နဲ့ ဆုံတွေ့ရတဲ့ ကဗျာဆရာများနဲ့ စကားလ...
မေလ ၁ ရက်နေ့ ၂၀၁၃ မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ MTP ဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲကို အကျဉ်းပြောရရင် ၅၀% လောက်သာ ကျေနပ်မှုရပါတယ်။ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း ပြောသွားတဲ့အထဲမှာ အကောင်းမြင်မယ်...
ကျွန်မတို့ ဒီလူ့လောကကြီးထဲကို ရောက်လာတာ ဘယ်လောက်ထိ ကံကောင်းတယ်ဆိုတာ သိကြတယ်မလား။ မိုးပေါ်ကအပ်တစ်စင်း နဲ့ မြေပြင်က အပ်တစ်စင်း ထိမိဖို့က လွယ်လိုက်မယ်။ လူဖြစ်ဖ...
ဂီတာ ၀ါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအဆင်ပြေမှာပါ ဒီစာအုပ်လေးကို နှစ်သက်ပါက ဒီမှာဒေါင်းယူပါ။။။
(၂၀ရာစု ဂျပန်ဝတ္ထုတိုများ) Filed under: Prose, Short Stories Tagged: ဘာသာပြန်, ဟာရူကီ မူရာကာမီ, မြတ်သစ်, ၀တ္ထုတို, Haruki Murakami, lanolay, Short Stories
ရည်ရွယ်ချက်တော့ မရှိပေမယ့် ကောက်ကာငင်ကာခရီးတစ်ခုထွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မန္တလေး ကိုရှေးရှူသွားကြမည်ဖြစ်သည်ဟူ၏။ ကျွန်တော် မန္တလေး သို့မရောက်
တိတ်ဆိတ်သောညည့်ယံမှာ ထွက်ပေါ်လာသည့် စားပွဲတင်နာရီလက်တံ၏ ရွေ့လျားသံကို သတိပြုမိတော့မှ နွယ် ရေးလက်စအစီရင်ခံစာကို အစအဆုံးတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီး မျက်လုံးက...
Android application ရေးသားဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံသဘောတရား
Android လို့ခေါ်တဲ့ မောင်းနှင်စနစ် သုံးသော မိုဘိုင်းဖုန်းတွေအတွက် ပရိုဂရမ်တွေ၊ application တွေရေးနည်းကို ရှင်းပြ ထားတဲ့ စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် P...
မကျေမနပ်နဲ့စာတန်းက
၅ မိနစ်လို့ပြနေတယ်
" အချိန်တန်တော့လည်း အိမ်ပြန်ရပြီပေါ့ "
ဟုတ်ပါတယ်။ ခုကျွန်တော် အိမ်ပြန်ရောက်နေပါပြီ။ ပြန်...
THINGYAN (NEW YEAR) GREETINGS Hi everyone! Mingalarbar, sending “Auspiciousness” to all of you from Yangon, Myanmar. We have entered into another glorious ...
အကွိုနေ့ ညနခေငျး မဏ်ဍပျရှမှေ့ာ ရိုကျထားတဲ့ ဓာတျ...
ခုတလောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ စာလေးဘာလေးရေးဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူးလားလို့ ချစ်ညီမလေးဆုမြတ်ကမေးလာတယ်.. ကိုယ့်အတွက် ခုတလောလောက် အပြောင်းအလဲတွေများ အလုပ်တွေရှုပ်တာ မရှ...
When Myanmar opens her door for tourist and greeted them warmly, it bringsagood impact on the tourism sector. For This reason,awoefully neglected secto...
ည တုန်းက ပြည့်ပြည့် ကို အင်္ဂုလိ မာလ အကြောင်း ပြောပြဖြစ်တယ်။ နောက်ဆုံး မှာ ဘုရင် က စစ်တပ် နှင့် ဖမ်းတော့ မယ်ဆိုတာ သိတော့ သူသား အင်္ဂုလိ မာလ ကို ထွက်ပြေးဖို့...
ပျော်ရွှင်မှု ရချင်ရင် ဒီအလုပ် (၁၀) မျိုးလုပ်နေတာကို ခုချက်ချင်း ရပ်လိုက်ပါ။
လူတွေ အပြစ်လုပ်မိတာဟာ ပုံမှန်ပါပဲ။ က...
မနေ့ကတစ်ရက်လုံး သတင်းတွေ ဟိုမှသည်မှ တက်နေတာကို တစ်နေကုန် စောင့်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရင်းနဲ့ စိတ်ညစ်ရသလို၊ စိတ်လည်းတိုရတယ်။ စိတ်ညစ်ရတာက ...
ဒီအိမ်မှာ ပြေးကြည့်လို့မှ သားအမိလေး သုံးယောက်ရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်က တမင်သက်သက် အပြင်မှာ ထွက်စားနေတယ်ဆိုတော့ ဘယ်ကောင်းမလဲ။ ဒါကို နှင်းသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှင်းေ...
15 /3/ 2010 ~ 15 /3/ 2013 把 '希望'
အရင်ကတည်းက ပူပင်တတ်တဲ့ ကျွန်မတို့ မိန်းမသားတွေဟာ ချစ်သူခင်သူတွေ နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါ ပိုပြီးတောင် ပျာယာခတ်နေတတ်သေးတယ် မဟုတ်လား။ ကိုယ့်ချစ်သူမှာ ကျန်းမာရေးနဲ...
စစ်တုရင် ခုံပေါ်ကလိုပဲ ကန့်လန့်ဖြတ်ကြီး သွားကြတယ်။
*ကောင်းကင်ကို *(March 02, 2013)
ည (၁၁) နာရီလောက်ဆို သူ့ဆီက မက်ဆေ့လေးတွေ ရောက်ရောက်လာတတ်တယ် ။ “အိပ်နေပြီလား” ၊ “ကောင်းသော ညလေးပါခင်ဗျာ” အဲ့လို အဲ့လို အစချီထားတဲ့ မက်ဆေ့လေးတွေပေါ့။ တစ်ကယ်ဆိ...
ဟင်းလင်းပြင်ကြီးဆိုပေမယ့် တည်ရှိမှုဟာထုထည်နဲ့ ။
နံရံတွေကြားမှာ စိုက်ထားတဲ့ အလှကပ်ပန်းပင်လို
စီးကျနေတဲ့ရမ္မက်ဟာ ၂၃ နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းစောင်းလျှက် စီးကရက်ငွေ့များကြားအကုသု...
မိုးနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေ... From Othersတစ်ခုကို အစာမစားမှီသောက်ပါ။ တစ်ခုကို အစားစားပြီး သောက်ပါ။ ၅ ရက်စာ ကုန်အောင်သောက်ပါ။ ခုရက်ပိုင်း မိုးရွာလိုက် နေ...
တယ်လို့ ဆိုတာမို့ ဖ၀ါးလက်နှစ်လုံး၊ ပခုံးလက်နှစ်သစ် ကလေးဘ...
ကိုယ်ပိုင် မကောင်းမူတွေ ဖုံးကွယ်ဖို့
၁၂. ၁၃. ၁၄
၁၉၁၅ မှာ ...
တကယ်တော့ ကိုယ်ဟာ အကောင်းဆုံးတွေကိုပဲ ပေးဆပ်ချင်ခဲ့တဲ့ကောင်ရယ်ပါ။ မှောင်မဲစုတ်ပြတ်နေတဲ့ ဘဝထဲ အလင်းလေးတစ်ခုမျှ ကိုယ် မပေးနိုင်မှတော့ မင်း...
အန်ကယ် ဆုံးပီဆိုတော့ ပြန်တွေ့ရဖို့အခွင့်က ဆုံးပီလို့ စိတ်ထဲပေါ်လာပါတယ်။ အရင်ကထဲက ကျန်းမာရေးကြောင့် ဘိလပ်မလာနိုင်တော့ဘဲ စင်္ကာပူတင် ကျန်းမာရေးစစ်နေရတာလဲ သိရဲ့။...
ဒီတခါတော့ ထုံပေပေ ခံစားမှုမဲ့ပုံရတဲ့ မြည်းတကောင်အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်..
လူတယောက်နဲ့ မြည်းတကောင် အတူတူနေတာကြာလှပါပြီ.. မြည်းက လူကိုမွေးစားတာလား.. လူက မြည်...
လူတိုင်းရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မိမိတို့၏ ဓလေ့ထုံးစံများ အရာဝတ္ထုများနှင့် ဖြစ်ပျက်စီးမျောနေသည့် အကြောင်းအရာများက သမိုင်းများက...
ကျွန်တော်တို့တတွေ လူကြီးမိဘတွေနဲ့ဝေးလာတာ (၂၄)လပြည့်တော့မည်။ ဆိုဆုံးမစကားတွေလည်း မကြာရတာကြာခဲ့သလို ချမ်းေ...
"လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ ရသ" စာပေဟောပြောပွဲကော်ပီကူးပြီးကြော်ငြာပေးပါတယ်ခင်ဗျာ-ကိုမင်းကိုနိုင် က ၂၀၁၅ ဆိုတာ ပန်းတိုင်မဟုတ်ဘူး-
ဖြတ်သန်းသွားရမည့် မိုင်တိုင်တစ်ခုတဲ ...
Top 50 Highest Gross Film
2 Titanic3The Avengers4Harry Potter and the Deathly Hallows – Part25 Transformers: Dark of the Moon6The Lord of the Ri...
အား... ကျောင်းထဲ ရောက်တော့ လူတွေ စုံနေပါရော့လား.... ညောင်လေးပင်က သူငယ်ချင်းရယ်၊ သူ့ တွဲဖော်တွဲဖက် ပဲခူးသား သူငယ်ချင်းတယောက်ရယ်ကို လှမ်းတွေ့လိုက်တော့ သူတု...
သားလေးက အခုဆို ၃နှစ်ပြည...
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသားဥယျာဉ်ကြီးများတွင် သစ်ခိုးထုတ်မှုများ ရှိနေကြောင်း သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပညာရှင် ဦးစည်သူလွင်က ပြောကြား လိုက်သည်။ မြန်မာနိုင...
Karaoke Song5months ago
ကမ္ဘာကျော် ဘောလုံးဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုဖြစ်သည့် Goal.com မှ အောက်တိုဘာလ အတွက် အာရှအကောင်းဆုံး အသင်းကို ဖော်ပြခဲ့ရာ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အသင်းနှင့် ရန်ကုန်ယူနိုက်တ...
Low waist jeans should be avoided, unless you are choosing rather than judging it through its price tag. Most women believe that the *discount dolce gabb...
ချစ်သူရဲ့ မျက်ဝန်း အမြန်ချောစာအရောက်မှာ
စိတ်ကူးနဲ့ ခိုးခိုး နမ်းဖူးတဲ့ပန်း
ယခု အပတ်အတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၀ါရှင်တန်ဒီစီ မြို့ရဲ့လမ်းတွေပေါ်၊ ရထားတွေ ပေါ်မှာ ဗမာဝတ်စုံ(ဒါမှမဟုတ်) တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံတွေ နဲ့အမေရိကရောက်မြန်မာ...
၀င့်ထယ်စွာ ပွင့်စေရေး အတွက် နွံ့ပုပ်ဘဲ နံနံ
မိုးလေဘဲ မှန် မမှန...
Mouse Trouble at Sydney Hilton Hotel
31 Aug 2012 18:00, A mouse ran pass under my legs at Sydney Hilton hotel lounge. A staff from the cafe and3guards ran after it withabag. The mouse got ...
အရင်ကတော့ ဘယ်လောက်ပဲခေါင်းမာခဲ့၊ ဘယ်လောက်ပဲ လည်ပင်းရှည်အောင် စောင့်မျှော်ခဲ့ပေမဲ့ အခုတော့ ကျွန်မလဲ မနေနိုင်တာနဲ့သြဂုတ်လ ၁၇ရက်နေ့က မိုဘိုင်းဖုန်းဝယ်လိုက်တ...
Decision made. I gonna leave Singapore soon, as soon as possible. Probably end of August? Submitted resignation letter today. But they wanted me to help th...
မိုင်တိုင်နံပါတ် ၂၅ (သို့မဟုတ်) အမှုန်တစ်ခုရဲ့ ကောက်ကြောင်း
ဒီနေ့ ၂၅နှစ်ပြည့်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ စက္ကန့်တွေမှာ လှုတ်ခတ်လွန်းတဲ့အမှုန်တစ်ခုဟာ ကျနော်ပါအသိဥာဏ်နဲ့ အရှိဟန်တွေရဲ့ကြားရိုးသားခြင်းငွေ့ရည်တွေ ကျနော် အငမ်းမရ ရှာဖွေနေတ...
အားလုံး..............အကောင်းဆုံးအပြောသမားဆုတွေနဲ့ လူတွေကငါတို့ဘ၀တွေကို ဆောက်လက်စအီဂျစ်ပိရမစ်အသစ်ကြီးဘေးက ကျွန်ပွဲမှာလက်ညှိုးထိုးရောင်းသလိုဈေးစစ်ဖို့ တောင်မလ...
ကိုယ့်စိတ်အကြောင်းပဲ ကိုယ်ရေးချင်တာပါ။ တခါတလေ ပျော်လိုက် တခါတလေ ဝမ်းနည်းလိုက်နဲ့ ထိန်းရလည်း ခက်သလိုလို။ ကြိုးစားပြီး တရားမှတ် ဘုရားရှိခိုး ပုတီးစိတ် တာတွေ လု...
မင်းသား Kang Ji-Hwan အကြောင်းတောင်းဆိုလာတဲ့ Su အတွက် သတင်းကောင်းလေးရှိပါတယ်… သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကားသစ် “Detective Cha” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် (ဇာတ်လမ်းတွဲမဟုတ်) အကြော...
ပေါ်စေချင်သည့်စာရေးရန် ...THIS IS YOUR PULLQUOTE TEXT...
လာဘ်ဖွင့် လာဘ်ပွင့် ကံကောင်းစေသော နည်းတစ်ခု
ဒီယတြာကို ကံဇာတာ မြင့်မားချင်သူများ ကံဇာတာ တိုးတက်စေချင်သူများ လာဘ်လာဘ ပွင့်လန်းစေချင် သူများ ရောင်းပန်းဝယ်ပန်း ပွင့်လန်းစေချင်သူများ ဆောင်ရွက်၍ ရသည်။ နိုင...
Wutyee Food House မှ မေတ္တာရပ်ခံချက် - အရင်က http://getacookrecipe.wordpress.com/ မှာ ဟင်းသစ်တင်တိုင်းသိနိုင်ရန် Email Subscription လုပ်ထားသော ဟင်းချက် မိတ်...
လန်ဒန်အိုလံပစ်တွင် ဒဏ်ရာရခါ ပြည်တော်ပြန်လာသော ကမ္ဘာ့အဆင့်(၁) လီချုံဝေးအား သူတို့ဝန်ကြီးမှ မည်ကဲ့သို့ ကြိုဆိုသနည်း
Breaking News: လန်ဒန်အိုလံပစ်တွင် ဒဏ်ရာရခါ ပြည်တော်ပြန်လာသော ကမ္ဘာ့အဆင့်(၁) လီချုံဝေးအား သူတို့ဝန်ကြီးမှ မည်ကဲ့သို့ ကြိုဆိုသနည်း။ မနေ့ 23,5,2012 က လန်ဒန်အို...
ဒီနှစ်သင်္ကြန်လည်း ထုံးစံအတိုင်းပဲ ရန်ကုန်မပြန်ဖြစ်ပါဘူး။ အွန်လိုင်းကနေပဲ ဓါတ်ပုံတွေကြည့်လိုက်၊ Live လွှင့်တာကိုကြည့်လိုက်နဲ့ ဒီနေ့ဆိုရင် မဟာသင်္ကြန်အတက်နေ့ကို ...
ဒီနောင်ခိုင်မြို့လေးက လာအိုနိုင်ငံက ဗီယန်ကျန်းမြို့နဲ့ နယ်နမိတ် ထိစပ်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က နယ်စပ်မြို့လေးပါ။ မြို့လေးက အေးအေးချမ်းချမ်းရှိသလို မြို့ခံလူေ...
အခုတလော မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကြားနေ၊ သိနေရတာတွေဟာ ကျနော်ငယ်ငယ်က တစ်ရပ်ကွက်တည်းနေ ရွယ်တူသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျနော်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့ တော်တော်ေ...
Golden Trade Postမှာတုန်းက NEMကို 51-52ကြားထဲမှာရရင် ဝယ်သင့်ကြောင်း Recommendလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မနေ့က Price Actionက ကွက်တိပဲ။ မုဆိုးဟာ အမဲကောင်ရေလာသောက်တဲ့အထိ စ...
လတ်တလောကာလအတွင်း ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ၁၉၉၂ ခုနှစ်များ၌ မကဒတ မြောက်ပိုင်း၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖမ်းဆီး အရေးယူမှုများနှင့် ပါတ်သက်၍ ပြောဆိုရေးသားမှုများကို ကြားသိတွေ့မြင...
လမ်းခွဲခြင်းရဲ့ အစက ပေါင်းစည်းခြင်းက
အကြင်လင်းမယားဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းစပ်တူတွေဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မိသားစုတွေဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းတွေဘဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နေ့တော့ ရှင်ကွဲမကွဲရင်တောင် သေကွဲကွဲရမည်မှာ လူ့လောက...
လေအလွင့် ကြွေလွင့်ခဲ့တာ နှင်းစက်မဟုတ်ပါဘူး ဒီည မှာ ကြွေကျခဲ့တာ မျက်ရည်တစ်စပဲဖြစ်မှာပေါ့ ။
ဘ၀ကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အောင်မြင်မှုပေးနိုင်တဲ့ အရာကတော့ စိတ်နေစိတ်ထား
အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ ABCD . . . Z အထိဆိုရင် ၂၆ လုံး ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အက္ခရာတွေကို ဒီလိုနံပါတ်စဉ်တွေ ထိုးပြီး စီကြည့်ရအောင် . . . A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H...
အာဖရိကတိုက်က တိုင်းရင်းသားတွေ အစဉ်အဆက် ပြောခဲ့ကြတဲ့ ပါးစပ်ရာဇ၀င်တွေထဲမှာ ဆင်သင်္ချိုင်း တွေရဲ့ အကြောင်းဟာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။ ဆင်ရိုးဆင်စွယ်တွေေ...
တအားရိုးသားလှနျးရငျတော့ အ သှားလိမျ့မယျနေျာ့..
သွျော.. ပွောငျးလဲနလေုိုကျတာ လို့ပွောပမေယျ့လညျး.. မပွောငျးလဲသေးဘဲ.. ရိုးသားလှတဲ့ ကြှနျတေျာ့ ညီတှကေို အားမရလိုကျတာ.. ဟူးးးး.. တောငျပျေါမှာပဲ ရိုးသားအေ...
မြက်ရိုင်းတွေ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ယိမ်းနွဲ့နေစဉ်
သနားပါတယ်လို့ လူတိုင်းပြောတတ် ကြပေမယ့် ကိုယ်ချင်းစာစိတ် လူတိုင်းမထား တတ်ကြဘူး။
ချစ်တယ်လို့ လူတိုင်းပြောတတ် ကြပေမယ့် မေတ္တာတရားနဲ့ ဘယ်သူမှ မပြည့်စုံကြဘူး။
အပိုင်း - ၁ အပိုင်း - ၂
အပိုင်း - ၃ အပိုင်း - ၄ အပိုင်း - ၅ အပိုင်း - ၆ အပိုင်း - ၇ အပိုင်း - ၈ အပိုင်း - ၉ အပိုင်း - ၁၀ အပိုင်း - ၁၁
PS II Game Converter for Networking with PC
Networking ကို အဆင့်လိုက် ရေးရင်းနဲ့ PS II game စက်ကို ကွန်ပြူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကိုရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ အဲဒီအတွက် လိုအပ်တဲ့ software နှစ်...
Than Lwin Eain Met
Copyright © MGTHANT.ME | Powered by Blogger & Theme by ThemesCook